Fanangonana trosa ho an'ny fanombohana eCommerce: Ny torolàlana voafaritra | Martech Zone
Ny fatiantoka mifototra amin'ny fifanakalozana dia zava-misy eo amin'ny fiainana ho an'ny orinasa maro, noho ny chargebacks, faktiora tsy voaloa, fivadihana, na vokatra tsy miverina. Tsy toy ny fampindramam-bola izay mila manaiky ampaham-bola marobe ho ampahany amin'ny maodelin'ny orinasan'izy ireo, maro ny fanombohana no mihevitra ny fahaverezan'ny fifanakalozana ho toy ny fanelingelenana izay tsy mila fitandremana firy. Izany dia mety hiteraka fitomboan'ny fatiantoka noho ny fihetsiky ny mpanjifa tsy voamarina, ary ny fihemoran'ny fatiantoka izay azo ahena be amin'ny dingana vitsivitsy. Amin'ity torolàlana manaraka ity dia hodinihintsika ireo fatiantoka ireo, ny antony hitrangan'izany, ary ny zavatra azo atao hampihenana azy ireo.
Ity torolàlana ity dia tena hanampy tokoa raha toa ianao ka eny amin'ny tsenambarotra mifandraika amin'ny chargebacks avy amin'ny mpanjifa sy ny mpivarotra izay tompon'andraikitra ara-teknika nefa matetika tsy afaka na tsy handoa, serivisy aorian'ny karama (dokam-barotra, SaaS, sy ny hafa) tsy afaka mandoa ny mpanjifa fa tsy manana na manana fitaovana fandoavam-bola lany daty amin'ny rakitra, orinasan-tsoratry ny eCommerce sy famandrihana mifandraika amin'ny chargebacks sy fangatahana famerenam-bola na fitantanana vola sy serivisy ara-bola miaina ny fiverenan'ny ACH ary fandoavam-bola hafa tsy hita.
Fahaverezana sy ny antony hitrangan'izany
Ny orinasa mahomby dia manana mpanjifa maro, ary maro ny mpanjifa miverina. Ny orinasam-pandraharahana lehibe dia manintona ny ankamaroan'ny mpanjifa mividy, mahazo vokatra ary / na serivisy ary miala am-pifaliana. Na izany aza, ny maodely fandraharahana rehetra dia iharan'ny fatiantoka sasany. Na dia mety fanahy iniana aza ny ankamaroany, dia asehon'ny fikarohana fa tsy mitombo izany isan-jato izany.
Ny dinamika amin'ny fividianana an-tserasera dia niova tanteraka tao anatin'ny folo taona lasa. Ny fividianana an-tserasera izao no mahazatra. Na serivisy fanasan-damba na boky vaovao, dia manana ny carte de crédit voatahiry izahay ary mividy tsindry 1-bika, miaraka amin'ny pejy fandraisana izay natao hampihena ny fifandirana. Ity tontolon'ny fividianana virtoaly ity, miaraka amin'ny lalànan'ny chargeback mora, nanjary mora kokoa tamin'ny fividianana fikorontanana ambany, dia mitarika ny fanenenan'ireo mpividy ary fahatsapana fa afaka mandà ny mpanjifa satria hanaiky izany fotsiny ny orinasa. Asehon'ny fikarohana fa 40% ny fiverenana sy ny chargebacks dia noho ireo antony ireo, fa tsy noho ny hosoka na halatra maha-izy azy. Mora izany, mahatsapa tsy misy atahorana, ary tsy misy resaka mifandraika amin'ilay mpivarotra.
Miankina amin'ny asanao, ny fatiantoka sasany dia hateraky ny hosoka sy ny halatra maha-izy anao (ny Chargeback Gurus dia nametraka io isa io tamin'ny 10-15% ambany ambany raha mitaha amin'ny hosoka amin'ny namana). Matetika ny ankizy dia mampiasa ny karatry ny ray aman-dreniny raha tsy fantany, fa mbola misy mpisoloky sahirana hatrany, indrindra rehefa mihabe ny hosoka amin'ny carte de crédit. Amin'ireto tranga ireto dia tsy hifampiraharaha amin'ny tena mpanjifa ianao, fa misy olona mampiasa ny antsipirihany.
Ohatrinona ny fatiantoka tafahoatra?
Ireo orinasa mifototra amin'ny fifanakalozana dia mila mandinika ny sisiny sy ny takian'ny mpamatsy vola. Ny ankamaroan'ny mpamatsy dia mitaky latsaky ny 1% amin'ny chargebacks ary latsaky ny 0.5% amin'ny fiverenan'ny ACH. Azonao atao ny "manafina" segondra mitera-doza, mampidi-bola amin'ny volanao raha ambany ny tahan'ny fatiantoka ankapobeny, saingy tsy maintsy ataonao ambany foana izany amin'ny ankapobeny. Mandritra ny fotoana maharitra, na ny tahan'ny fatiantoka 1% aza miangona arakaraka ny fandehan'ny fotoana.
Fisorohana ny serivisy
Ao amin'ny tontolon'ny risika amin'ny fifanakalozana, fahalalana mahazatra ny fotoana lanin'ny orinasa amin'ny fisorohana sy ny fitadiavana alohan'ny handehanan'ny fifampiraharahana, nefa tsy miraharaha tanteraka ny fanalefahana sy ny serivisy aorian'ny fatiantoka.
Ny fatiantoka dia ampahany amin'ny orinasa rehetra, satria ny manatsara ny fatiantoka aotra dia midika fisorohana be loatra - ampodinao ny orinasa tsara. FraudSciences, ary mpamatsy fisorohana fisolokiana tany am-boalohany, dia afaka nanampy ny mpivarotra nitombo avo efatra heny tamin'ny fandraharahana tamin'ny chargebacks. Tokony hoheverinao hoe ohatrinona ny orinasa lavinao noho ny fepetra voafetra loatra, ary inona koa no azonao atao raha ambany ny tahan'ny fatiantoka anananao.
Raha manome serivisy ianao ary esory fotsiny ho an'ireo mpanjifa tsy mandoa izany dia mety hiaina tahan'ny fatiantoka ambany kokoa ianao. Tokony hojerenao hoe ohatrinona amin'ireo mpanjifanao no afaka mandresy amin'ny fiezahana hamaha ny fandanjana miavaka sy ny fihainoana azy ireo. Ny serivisy aorian'ny fatiantoka tsara dia mifantoka amin'ny zavatra niainan'ny mpanjifa tamin'ny famahana ny olan'ny serivisy tahaka ny fahazoany vola tokony ho anao.
Toy izany koa amin'ny fatiantoka amin'ny hosoka. Na dia misy aza ny sasany amin'ireo tranga hosoka ireo dia maro no vokatry ny tsy fifankahazoan-kevitra na tsy fitovian-kevitra momba ny serivisy. Amin'ny alàlan'ny fananganana fikorianam-panompoana izay mifantoka amin'ny fahatakarana ny tanjon'ny mpanjifa, azonao atao ny manatsara ny fihazonana, mampianatra ny ekipanao ny fomba hisorohana ny fatiantoka tsaratsara kokoa ary hahazo karama.
Ny andro fiandohana voalohany
Manoro hevitra anao izahay hiasa amin'ny fatiantoka ao an-trano mandritra ny herinandro vitsivitsy. Ny miasa amin'ny fatiantoka ny tenanao dia manana tombony roa:
Satria mampiasa ny marikao hifandraisanao amin'ny mpanjifa ianao dia azo inoana fa mihavana amin'ny mpanjifa misavoritaka ka mitazona azy ireo.
Ny fifampiraharahana amin'ireo mpanjifa sosotra dia mety ho lesona sarobidy momba ny orinasanao, ary tsy te hiantehitra amin'ny olon-kafa hanome anao ny valiny mialoha ianao.
Misy zavatra roa tokony hatao aorian'ny default:
Manomboka an dingana fanarenana mandeha ho azy. Raha tsy nahomby ny fandoavana karatra dia andramo avereno indray aorian'ny andro vitsivitsy. Raha tsy nahomby ny fandoavam-bola ACH dia diniho indray ny fanandramana (hafa ny firafitry ny sarany ho an'ny ACH ary sarotra kokoa ny manandrana indray). Raha manana fitaovana fandoavam-bola mihoatra ny iray mifamatotra amin'ilay kaonty ianao, manandrama manery azy io. Tokony hiarahana amin'ny fanandramana maivana izany.
Start solontena amin'ny mpamatsy vola anao. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho fantatrao hoe inona ny karazana porofo takiana mba hisolo tena anao ary hihatsara kokoa amin'ny famadihana chargebacks. Azonao atao ny mahazo 20-30% miverina amin'ny fampiasana an'io fomba io.
Rehefa tsy mahomby ny fanangonana aloha
Orinasa maro no mihemotra amin'ny fampiasana maso ivoho manangona trosa mba hanarenana ny fatiantoka. Nahazo laza ratsy ny indostria tamin'ny alàlan'ny fanohizana fampiasana tetika mahery setra sy UX ratsy. Eo no tena ilana ny fisafidianana ny vady sahaza; ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa teknolojia manampahaizana manokana amin'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fanangonana trosa dia afaka manampy ny marikao.
Ny asa fanangonana Outsourcing dia afaka manohana ny marikao amin'ny alàlan'ny fanomezana fomba ho an'ny mpanjifa ny fahasosorana alohan'ny handoavana vola. Ho an'ireo mpanjifa izay mandà tsy hiresaka aminao, ny fanolorana dingana marim-pototra eo am-pitakiana ny fandoavam-bola dia fivoahana mahomby hahafantarana ny antony namadihan'izy ireo ny fandoavany voalohany.
Marina ihany koa izany ho an'ireo niharan'ny hosoka: ny fanomezana fomba mora hanehoan'ny mpanjifa ny heviny amin'ny antoko fahatelo dia matetika manampy amin'ny fanavahana ireo tena iharan'ny fisolokiana amin'ireo mpividy nenina ary manome fiarovana sy fahatakarana ho an'ireo tra-boina.
Ny fatiantoka fifanakalozana dia ampahany amin'ny fanaovana orinasa ary mila fitandremana izy ireo. Ny fampiasana fomba tsotra ao an-trano miaraka amina mpiara-miasa matanjaka dia afaka manampy anao hahazo karama, hahatakatra tsara kokoa ny mpanjifanao, ary hanatsara ny fitazonana anao mihitsy aza.
Tags: hosoka amin'ny ecommercehosoka amin'ny namanaoutsource fanangonana trosafatiantoka amin'ny fifanakalozana